ပညာဒါန အစီအစဉ်သည် စင်ကာပူတွင် ရောက်ရှိနေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ မြန်မာများ၏ English4Skills, လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အသုံးတည့်နိုင်မည့် အခြေခံ အသိပညာများကို မြှင့်တင်ပေးရန် ကြိုးစားထားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်၍ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူ့ကိုမဆို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
စင်ကာပူတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာများ၏ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် စကားပြော၊ တရုတ်စကားပြော၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများ တိုးတက်လာစေရန်ရည်သန်၍ ပင်နင်စူလာ ၇ ထပ်၊ အခန်း ၂၆ တွင် ပညာဒါနသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ကာ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ယခု နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ မသိသေးသူများအား လက်တို့လိုက်ကြ ပါကုန်။
ကျွန်တော်၏ Piping Engineering သင်တန်းကို လာမည့်စနေနေ့ (၉-၇-၂၀၁၁) နေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်ရာ သင်တန်း တက်လိုသူများ ကြော်ငြာစာရွက်တွင်ပါသည့် Piping Class, Class Code: EN101 ဆိုပြီး စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။ (ကျွန်တော့်ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန် မလိုပါ။)
စာရင်းပေးနည်းမှာ ထို EN101 ဘေးနားကပ်လျှက်ဖော်ပြထားသော ဖုံးနံပါတ် ၈၃၉၃ ၁၄၀၇ သို့ မိမိနာမည် နှင့် EN 101, July Intake ဆိုပြီး sms ပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသင်တန်းများသို့ တက်လိုသူများလည်း သက်ဆိုင်ရာသင်တန်း code နှင့် ၎င်းသင်တန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဖုံးနံပါတ်သို့ မိမိနာမည်၊ သင်တန်းcode: မည်သည့်လတွင်စမည့်သင်တန်း စသည်တို့ကို sms ပို့ကာ register လုပ်နိုင်ပါသည်။
Posted by ပညာဒါန at 7:16 AM No comments:
Concrete Mix Design Seminar Part One
Concrete Mix Design Seminar Part 1.
Concrete Mix Design Seminar Part 2.
Concrete Mix Design Seminar Part 3.
Concrete Mix Design Seminar Part 4.
Posted by ပညာဒါန at 7:43 AM No comments:
Construction Project Planning Seminar
Construction Project Planning ဟောပြောပွဲ ဗီဒီယိုကို ဤနေရာတွင် download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
Posted by ပညာဒါန at 6:27 AM2comments:
Aircond သင်တန်း၊ Programming သင်တန်း၊ Electrical သင်တန်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ အောက်တွင် သင်ရိုးများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ -
၄။ တက်လိုသော အချိန်၊ နေ့ရက်
စသည်များကို 8298 5795 သို့ sms ပို့လိုက်ပါ။
သို့မဟုတ် #07-21, Peninsula Plaza တွင်လူကိုယ်တိုင်သွား၍ စုံစမ်းမေးမြန်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Posted by ပညာဒါန at 6:05 AM No comments:
ပညာဒါနသင်တန်းများ တက်ရောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းသတင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
အလုပ်များအလွန်ရှုပ်နေသဖြင့် post အသစ်မတင်နိုင်ခြင်းအတွက် တောင်းပန်ပါသည်။
Civil Engineering ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲ စာရွက်စာတမ်း၊ စာအုပ်၊ ဟောပြောပွဲမှတ်စု၊ slide presentation, video စသဖြင့် upload လုပ်ရန် များစွာ အကြွေးတင်နေပါသည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင် အလုပ်ပါးသွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုအခါမှ စုပြုံတင်ပေးလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
ပုံကြီးမြင်ရရန် နှင့် download လုပ်ရန် ပုံပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
Posted by ပညာဒါန at 5:07 AM No comments:
နေ့ရက်။ ။ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန်။ ။ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲ မှ ၂ နာရီခွဲ ထိ။
နေရာ။ ။ #07-21, Peninsula Plaza
“ Development of A Computer Program for Grid Structure Analysis ”
ဟောပြောမည့်သူ - Ne Min Hein
B.E (Civil), YIT
M.E (Civil, Structural) , YIT
M.Sc (ICM), NTU
နေ့ရက်။ ။ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေနေ့)
“ Basic Concepts on Steel Structure Design and Construction ”
ဟောပြောမည့်သူ - Tin Myaing
M.Sc (Civil Engineering) , NUS
R.E (Sing Holding Pte. Ltd.)
Posted by ပညာဒါန at 6:45 AM No comments:
Link for the Seminars Presentation Slides
Construction Project Planning နှင့် Concrete Mix Design Seminar များမှ presentation slides များကို အောက်ပါ link တွင် download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပထမ မိမိကိုယ်ပိုင် User ID , Password များနှင့် 4share account ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ပို့လာသော email ကို ကလစ်နှိပ်၍ confirm လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိ account သို့ login လုပ်ပြီး download ယူနိုင်ပါသည်။
Posted by ပညာဒါန at 7:03 PM No comments:
Shout At Here
Htay Win Naing